Source Code (2011) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
IMDB: 7.5/10 477073 votes
“သပွေီးတာတာငျ တိုငျးပွညျတာဝနျထမျးဆောငျနရေတာ ဂုဏျယူစရာပဲ”
ဒီစကားကို သငျလကျခံပါရဲ့လား ? လှတျလပျမှုကို ဘယျအခြိနျထိ ထိနျးခြုပျထားကွမှာလဲ သူတပါးဦးနှောကျကို သှငျးခငျြရာသှငျး ဖကျြခငျြသလိုဖကျြ SD Card လိုသဘောထားနကွေတာဟာတရားရောဝငျရဲ့လား ?ဒီအတှေးတှနေဲ့အတူ ရသမြိုးစုံပေးသှားမယျ့ Source Code ဆိုတဲ့ဇာတျကားမှာ စှယျစုံရမငျးသားကွီး Jake Gyllenhaalက ဦးဆောငျပါဝငျထားပါတယျIMDb 7.5 နဲ့ RT 91% ဆိုတော့ ပရိသတျတှေ
ဇာတျလမျးအစမှာတော့ ခြီကာဂိုမွို့ပတျရထားပျေါမှာ နိုးထလာသူတဈယောကျ
ကိုယျမသိတဲ့ ကောငျမလေးတဈယောကျက ရငျးရငျးနှီးနှီး စကားတှလောပွော ကိုယျမကွားဖူးတဲ့ နာမညျနဲ့ ကိုယျ့ကိုချေါ မှနျသှားကွညျ့တော့လညျး ကိုယျ့မကျြနှာမဟုတျပိုကျဆံအိတျထဲက အိုငျဒီကဒျကလညျးကိုယျ့ကဒျမဟုတျရထားပျေါကို ဘယျလိုရောကျလာတာလဲ
ဘာရညျရှယျခကျြနဲ့ ပို့ဆောငျခံရတာလဲ ဇာတျလမျးအကဉျြး မသိထားလေ ပိုကောငျးလမေို့ကွညျ့ဖွဈအောငျသာကွညျ့ပါလို့ တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ….
“သေပြီးတာတာင် တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတာ ဂုဏ်ယူစရာပဲ”
ဒီစကားကို သင်လက်ခံပါရဲ့လား ? လွတ်လပ်မှုကို ဘယ်အချိန်ထိ ထိန်းချုပ်ထားကြမှာလဲ သူတပါးဦးနှောက်ကို သွင်းချင်ရာသွင်း ဖျက်ချင်သလိုဖျက် SD Card လိုသဘောထားနေကြတာဟာတရားရောဝင်ရဲ့လား ?ဒီအတွေးတွေနဲ့အတူ ရသမျိုးစုံပေးသွားမယ့် Source Code ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာ စွယ်စုံရမင်းသားကြီိး Jake Gyllenhaalက ဦးဆောင်ပါဝင်ထားပါတယ်IMDb 7.5 နဲ့ RT 91% ဆိုတော့ ပရိသတ်တွေ
ဇာတ်လမ်းအစမှာတော့ ချီကာဂိုမြို့ပတ်ရထားပေါ်မှာ နိုးထလာသူတစ်ယောက်
ကိုယ်မသိတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ရင်းရင်းနှီးနှီး စကားတွေလာပြော ကိုယ်မကြားဖူးတဲ့ နာမည်နဲ့ ကိုယ့်ကိုခေါ် မှန်သွားကြည့်တော့လည်း ကိုယ့်မျက်နှာမဟုတ်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက အိုင်ဒီကဒ်ကလည်းကိုယ့်ကဒ်မဟုတ်ရထားပေါ်ကို ဘယ်လိုရောက်လာတာလဲ
ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပို့ဆောင်ခံရတာလဲ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း မသိထားလေ ပိုကောင်းလေမို့ကြည့်ဖြစ်အောင်သာကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်….
Albert Kwan Anne Day-Jones Brent Skagford Cas Anvar Clarice Byrne Craig Thomas Frédérick de Grandpré Gordon Masten Jake Gyllenhaal James A. Woods Jasson Finney Jeffrey Wright Joe Cobden Kyle Allatt Kyle Gatehouse Lincoln Ward Matt Holland Michael Arden Michelle Monaghan Paula Jean Hixson Pierre LeBlanc Russell Peters Scott Bakula Susan Bain Tom Tammi Vera Farmiga
Option 1 storage.msubmovie.com 440 MB SD (480p)
Option2yuudrive.me 440 MB SD (480p)
Option3sharer.pw 440 MB SD (480p)
Option7storage.msubmovie.com 2.6 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 8 yuudrive.me 2.6 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option9sharer.pw 2.6 GB FHD (1080p) DTS 5.1